छोटकरीमा : उत्तराखण्डमा हिमपहिराे- १९ जनाकाे मृत्यु, थुप्रै बेपत्ता,
18 दिन पहिले
भातको उत्तराखण्डमा गएको हिमपहिरोमा परेर सोमबारसम्म १९ जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा परी २ सयभन्दा बढी बेपत्ता भएका छन्। विज्ञहरूले घटनाको कारण तापक्रम वृद्धि भएकाे हुनसक्ने बताएका छन्।
भारतकाे उत्तराखण्डमा हिम पहिराे गएकाे छ। आइतबार हिमपहिराेमा परी इलाकामा थुप्रै क्षति भएकाे छ।
उत्तराखण्डमा प्रकृतिको विनाशः २४ घण्टापछि पनि उद्धारको पर्खाइमा पीडित, सयौं बेपत्ता
deshsanchar.com18 दिन पहिले
हिमपहिरोका कारण तिब्र बेगको पानी र हिउँले पुल, सडक र दुईवटा विद्युतगृहमा व्यापक क्षति पुगेको छ भने १९ जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा परी २ सयभन्दा बढी बेपत्ता भएका छन्।
उत्तराखण्ड : ग्लेशियर फुट्दा बेपत्ता भएकामध्ये १९ जनाको शव भेटियो, २०७ जना बेपत्ता भएको आशंका
विज्ञहरूले आइतवारको घटनाको कारणमध्ये सबभन्दा प्रबल सम्भावनाका रूपमा तापक्रममा आएको वृद्धि भएकाे हुनसक्ने बताएका छन्।
किन आयो उत्तराखण्डमा भयानक बाढी? - BBC News नेपाली
www.bbc.com18 दिन पहिले
प्रधानमन्त्रीले आफूलाई हटाएर देखाउन प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई दिए चुनाैती
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दलकाे बैठक नडाक्ने बताएका छन्। उनले आफैलाई हटाउने बैठक नडाक्ने ओली पक्षका नेताहरूकाे दाबी छ। नेकपाभित्रकाे विवादका कारण संसद विघटन भएसँगै काम चलाउ बनेका प्रधानमन्त्री ओली संसद पुनःस्थापना भएसँगै कार्यकारी बनेकाे र बरु परिस्थितिकाे सामना गर्दै अघि बढ्ने समेत ओली समूहकाे तयारी छ। यता नेकपाकाे प्रचण्ड-नेपाल समूहले भने ओलीलाई हटाएर जाने रणनीति लिएका छन्।
नेकपा विवाद टुंगाे लागेपछि मात्रै नयाँ सरकारबारे निर्णय गर्ने कांग्रेसकाे निर्णय
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकाे पदाधिकारी बैठकले नेकपा विवाद टुंगाे नलागेसम्म भावी सरकारबारे निर्णय नलिने भएको छ। बैठकमा पदाधिकारीहरूले कांग्रेसले हतारमा निर्णय लिन नहुने बताएका हुन्। संसद् पुन:स्थापनापछि नेकपा एक भएकाे सन्दर्भमा कांग्रेसले साेचविचार गरी कदम चाल्नुपर्ने निष्कर्ष बैठककाे छ।
फाल्गुन २० मा नेकपा नाम विवादकाे फैसला आउँदै
सर्वाेच्च अदालतले नेकपाकाे नाम सम्बन्धी विवादकाे टुंगाे फाल्गुन २० गते लाउने भएकाे छ। न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले सुनुवाई सकेर निर्णय सुनाउने मिति फागुन २० गतेका लागि तोकेको हाे। तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमालेबीच एकता भएपछि हालकाे सत्तारूढ नेकपाकाे निर्माण भएकाे थियाे। निर्वाचन आयोगमा त्यसअघि नै ऋषिराम कट्टेलको नाममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दर्ता भएकाे भन्दै उनले मुद्दा दायर गरेका थिए।
विश्वभर ४ कराेडले लगाए खाेप, लगाएकाहरूमा एन्टीबडी बन्दै
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएकाे काेराेना भाइरस (काेभिड-१९) काे खाेप लगाउनेहरूकाे संख्या ४ कराेड पुगेकाे छ। विभिन्न देशहरूमा पत्ता लागेकाे काेभिड खाेप लाउने कार्य विश्वभरि नै अहिले अभियानका रूपमा जारी छ। हालसम्म विश्वभर झण्डै ४ करोड ३६ लाखभन्दा बढी मानिसले कोरोनाविरुद्धको खोपको पूरा मात्रा लगाइसकेका छन्। खोप लगाएकाहरूमा एन्टीबडी बनेकाे समेत विज्ञहरूले बताएका छन्।
अन्जु पन्तले गरिन् बिहे, काे हुन् बेहुला ?
चर्चित गायिका अन्जु पन्तले बिहे गरेकी छन्। उनले इलामका थीर कोइरालासँग विवाह गरेकी हुन्। उनीहरू बीच तीन वर्ष लामाे प्रेम सम्बन्ध रहेकाे थियाे।
माउन्ट केटु चढ्नेहरूलाई सेनाले गर्याे सम्मान
विश्वकाे दाेस्राे ठूलाे हिमाल माउन्ट केटु चढ्ने टाेलीलाई नेपाली सेनाले सम्मान गरेकाे छ। सैनिक मुख्लायमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले आरोही दलका सदस्यहरुलाई कदरपत्र प्रदान गरेका हुन्। टोलीले माघ ३ गते माउन्ट केटुको सफलतापूर्वक आरोहण गरेका थिए। सम्मान कार्यक्रममा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सामूहिक भावनाले गरे जुनसुकै काम पनि सम्भव हुने उल्लेख गरे। त्यस्तै कार्यक्रममा आराेहण दलका नेता निर्मल पूर्जा पुनमगरले नेपाली आरोही भरिया मात्र नभएकाे बताए।